Daacish oo cadaadiskii ugu adkaa saartay Suuqa Bakaaraha | KEYDMEDIA ENGLISH
Daacish oo cadaadiskii ugu adkaa saartay Suuqa Bakaaraha
Dowladda Federaalka, oo hore uga warqabtay in Al-Shabaab canshuuran guud ahaan ganacsatada Caasimadda, ayaan wali wax war ah ka soo saarin go’aannada Daacish ee shacabku dhibbanayaasha u noqdeen.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Soomaaliya iyo Kooxda Al-Shabaab ayaa ganacsatada Gobolka Banaadir hore uga qaadi jiray labo canshuur, hayeeshee, tan iyo billowgii sanadka cusub, waxaa soo kordhay cadaadis xooggan oo ka imaanaya Kooxda Daacish.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen milkiilayaasha xarumo ganacsi oo intooda badan ku yaalla Suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha, Kooxda Daacish, ayaa soo saartay amarro lagu bixinayo canshuur, taas oo ka badan inta ay qaadaan Al-qaaciddada geeska Afrika.
Sida ay caddeynayan xogaha ay ganacsatadu la wadaagen KON, Kooxdaan ayaa dishay shaqsiyaad ka dhago adeegay bixinta lacagta baadda ah ee ay canshuurta ku sheegeen, halka ay 24 January 2022, qarax ku xireen goob ganacsi oo ku taalla degmada Holwadaag.
“Daacish waxa ay dishay milkiilayaal xarumo ganacsi, halka ay labo maalin ka hor qarax ku xirtay goob ganacsi oo Holwadaag ku taalla, waxa ay dalbanayaan canshuur aan caadi ahayn oo u dhiganta inta Al-Shabaab sanadkii qaadaan”. Ayuu yiri ganacsade aan tan iyo Isniintii shaqo tagin.
Qeybo ka mid ah suuqa ayaa maanta xiran, kadib markii ganacsatadu sheegeen in aysan awoodin bixinta lacagta la dul-dhigay, isla-markaana Daacish ku amartay in haddii aysan diyaar u ahayn lacag bixinta ay albaabada isugu dhiftaan goobaha ganacsi.
Ma aha markii koobaad ee amar ka yimaada Dhaacish lagu xiro qeybo ka mid Suuqa Bakaaraha, hayeeshee, amarrada hadda ka soo baxay kooxda ku xooggan buuraha gobolka bari, ayaa si weyn uga duwan kuwii hore, waxayna si cad duullaan maal aruursi ah ugu soo qaadeen suuqa.
Dowladdu waxa ay canshuur ku qaadataa kaliya ilaalinta amniga, maadama aysan adeegyada aasaasiga ah bixin, sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha, korontada IWM, hayeeshee, amnina gacan kuma heyso, oo maanta amar bari ka yimid ayuu u xiran yahay suuqa Bakaaraha.